Loogu talagalay in la aaminsan yahay oo caan ah in baabuurta gudaha Anadol Turkey | RayHaber | raillynews
HomeGUUDGuriga Car Hmong aaminsan caanka ah waxa loo qorsheeyay in Turkey
29 / 12 / 2019 GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, baabuurta, TURKEY
Loogu talagalay oo soo saaray dalka Turkiga waxaa loo malaynayaa in Anadol ugu horeeyay ee gaari. Si kastaba ha noqotee, qaabeynta Anadol waxaa sameysay shirkada Reliant ee Ingriiska (Reliant FW5) wax soosaarkana waxaa lagu sameeyay shatiga laga helay Otosan. Fiirsiga, matoorada iyo gudbinta Anadol waxaa laga soo qaatay Ford.
Gaariga ugu horreeya ee Turkiga marka loo eego qaabeynta iyo injineeriyadda waa Devrim. Kacaankii ka hor (1953), waxaa jiray daraasado aan ugu yeeri karno "tijaabinta adlandır ee ku saabsan soo saarista gawaarida, in kasta oo Kacaanka loo arki karo qaab dhismeedka ugu horreeya ee Turkiga iyo xitaa nooca ugu horreeya ee Turkiga.
In Turkey, Anadol baabuur ugu horeysay-soo-saarka taxane Inkastoo waxaa sheegtay inuu yahay milkiilaha Ehelka title this waa 200 Nobel waa gaari yar. gaariga, soo saaray hoos liisanka dalal badan, Turkey, UK iyo Chile Nobel, Germany iyo Fuldamobil ee Koonfur Afrika, Sweden fram King Fulda, Bambi In Argentina, Bambino ee Netherlands, Greece, Attica, in Hindiya Hans Vahaar wuxuu ku socdaa wadooyinka isagoo wata magacyadooda. Rakibaadda ee wax soo saarka yar this baabuur bilaabay 1958 Turkiga ayaa joojiyey in 1961. Adduunyada, waxay ku sii jirtay wax soo saar intii u dhaxeysay 1950-1969.
La aasaasay 1928 by Vehbi Koç Otokoç, 1946, wuxuu ahaa wakiilka shirkadda Ford ee Motor, 1954, ka dibna waxa ay bilaabeen wadahadalo kula wakiillo ka Ford in ay soo saaraan baabuur ee Turkey. Sannadkii 1956, Vehbi Koç wuxuu warqad ka helay ra'iisul-wasaarihii hore Adnan Menderes wuxuuna u aaday Bernar Nahum iyo Kenan İnal oo loo diray Henry Ford II. Sannadkii 1959, Kooxda Koç waxay aasaastay Otosan. Shirka gawaarida xamuulka ee Ford wuxuu ka bilaabmay Otosan.
Fikradda Fiberglass iyo soosaarka gawaarida
Sanadkii 1963, halka Bernar Nahum iyo Rahmi Koç ay joogeen Izmir Fair, gaari ka sameysan Fiberlass-ka Israel ayaa soo jiitay dareenkooda. Qaabkan, oo aad uga qiimo jaban soosaarka birta, wuxuu ku dhiirigeliyay Vehbi Koç inay bilaabaan soo saarista gawaarida guryaha. Waxaa naqshadeeyay Koç Holding iyo Ford, Naqshadeynta Anadol waxaa iska leh shirkadda 'British Reliant' oo gaasta iyo matoorrada laga keenay Ford ayaa loo adeegsaday gaariga. Wax soo saarka Anadol wuxuu bilaabmay 19kii Diisambar 1966, waxaa la soo bandhigay markii ugu horeysay 1dii Janaayo 1967 waxaana la bilaabay in la iibiyo 28ka Febraayo 1967.
Magaca Anadol iyo wax soo saar
Magaca Anadol wuxuu ka yimid ereyga "Anadolu" waxaana laga soo dhex xushay ciyaartoydii Anadolu, Anadol iyo Koç ee u soo baxay finalka iyadoo ay ugu wacan tahay magaca magaca iyo Otosan Otomobil Sanayi A.Ş. ayaa la bilaabay in laga soo saaro warshadda ku taal Istanbul. Astaanta Anadol waxay astaan ​​u tahay mid ka mid ah astaamaha deerada ee reer Xeed. Wax soo saarkii Anadol, oo sii socday 1966 ilaa 1984, ayaa la joojiyey 1984 waxaana bedelkeeda laga mamnuucay shirkadda Ford Taunus, taas oo hoos timaad ruqsadda shirkadda gawaarida gawaarida ee Ford, wax soo saarka Otosan 500 iyo turjumaada 600D ayaa sii socday illaa 1991. Maanta, iyada oo la cusbooneysiinayo shatiga shirkadda gawaarida ee Ford, Otosan wuxuu sii wadaa inuu soosaaro gawaarida ganacsiga ee light light ee xarumaha cusub ee Gölcük wuxuuna u dhoofiyaa gawaarida gawaarida ee ruqsada leh ee wadamo badan, gaar ahaan Midowga Yurub.
Qeexitaanka Gaarka iyo iibinta
In kasta oo soosaarka "Anadol" uu bilaabmay 19kii Diisambar 1966, oggolaanshaha "Shahaadada Aqoonta Shahaadada iyo Xeerka 'Yönetmelik Regulation' ee waxsoosaarka, dib u habeynta iyo isu imaatinka gawaarida olan ee looga baahan yahay iibka iyo diiwaangelinta taraafikada waxaa laga helay Rugta Injineerinka injineeriyada 28ka Febraayo 1967 iyo sidaa darteed, iibka Anadol wuxuu bilaabmay taariikhdan ka dib.
Moodooyinka hore ee Anadol waxaa naqshadeeyay British Reliant iyo Ogle Design. Moodooyinka oo dhan waxay ka samaysan yihiin fiber galaas ah, matoorrada jirka ee Anadol'da Ford waxaa loo isticmaalay mashiinka. Mashiinka ugu horeeya ee la adeegsaday waa 1200 cc Kent engine oo ka tirsan 'Ford's Cortina'.
Anadol, oo la iibiyay bishii Diseembar 1966, wuxuu iibiyey 1984 unug ilaa wax soosaarkii uu ka joogsaday 87.  Tiro yar oo muunad ah ayaa hadda loo tixgelinayaa inay yihiin kuwa heer sare ah, ilaaliya oo adeegsanaya xiiseeyayaashu. Intaa waxaa sii dheer, waxaa wali looga isticmaalaa magaalooyinka yaryar ee Anatolia, halkaas oo loogu magacdaray ka dib googoynta iyo baabuurta la sameeyay. Intaa waxaa sii dheer, Ingiriiska ayaa sameeyay dadaal ay ku soo saarayaan isla Anadol isla New Zealand iyo maalmahanba Anadol waxaa loo isticmaalaa jasiirad ku taal New Zealand.
Teknolojiyaddan ayaa laga adeegsan jiray adduunka oo dhan, maadaama buulku yahay fiberglass, oo lagu faafiyo warar xun oo ku saabsan hooddiisa, taasoo dhalisay xanta in lo'da, digaaga iyo dameeraha ay cunaan.
Anadol A1 waxaa soo saaray Shirkadda Reliant-ka Ingriiska ee amarka Otosan Otomobil Sanayi A.Ş. ee hoos timaadda koodhka “FW5 ve iyo waxsoosaarka ayaa bilaabmay 19kii Diseembar 1966. A1 waxaa naqshadeeyay Tom Karen oo ka tirsan Ogle Design UK. Wax soo saarkii ugu horreeyay ee A1 wuxuu ahaa mashiinka Ford Cortina 1200 Kent wuxuu ahaa 1959 cc, 1968-kii waxaa lagu bedelay matoor awood badan oo ah 1300 cc Ford Crossflow. Sanadkii 1969, gudiga qalabka dib ayaa loo cusbooneysiiyay oo isteerinka wuxuu noqday ergonomic kale. Sanadkii 1971, saqafka kabida waxaa lagu daboolay vinyl sida moodada maalintaas. Naqshaddani waxay sii ahaatay nooca MkI illaa Abriil 1972. Moodeelka A1971 ee loo sameeyay Ciyaaraha Mediterranean ee lagu qabtay Izmir sanadkii 1 waxaa loogu magac daray "Anadol Akdeniz ve iyo soosaarka moodeelkan wuxuu biloowday 1972. Moodhidan loo yaqaan 'MkII', wareegga qaab-hoosaadka madax-madaxeedyada ayaa lagu beddelay madax-madaxeed afarta gees ah iyo guntin-gashiga iyo burooyinka ayaa dib loo cusbooneysiiyay. Naqshaddan cusub, ciribtiryadu waxay noqdeen kuwo jirka lagu dheereeyo, grille hore ayaa la beddelay, nalka iyo signaladaha waxay ahaayeen kuwa qaabaysan, signalada iyo laambada joogsiga waxay leeyihiin qaab saddex geesood ah. Gudaha qolka kabtanka waxaa ka dhacay is badal weyn, dashboorkii iyo daaqaddii, kuraastii waa la badalay tayada tayada agabkii loo isticmaalayna waa la wanaajiyay. Heerkan, oo loo adeegsaday barnaamijka 'Anupol Coupé' 1972, wuxuu ahaa isla sidii ilaa dhamaadka soo-saarka A1 (1975).
Anadol A2 taxane, balse waxa uu ahaa gaari ugu horeysay Turkey ee 4-albaab, 4-albaabka marka hore la jirka Maro adag a dunida oo dhan ayaa hoos ugu tegey, taariikhda sida nooca yaryar ah. Waxaa la sameeyay 1969, tusaalaha 'A2 "oo la soo saaray oo la sii daayay 1970-kii.
Taxanaha A2 waxaa soo saaray matoorka 1300cc Kent ee Ford Cortina. Waxaa loogu yaqiinay hal kursi oo gabal hore ah, moodellada noocan ah A2-da hore waxay ahaayeen farsamo ahaan isku qalab sida moodooyinka A1. Tiro yar oo noocyada MkI ah, oo lamid ah qaab dhismeedka jirka A1972 laga soo bilaabo 1 oo loo soo saaray MkII A2 (sanka, grille, nalka madax iyo calaamadaha) ayaa hal qaab la mid ah ku jiray ilaa dhammaadkii 1975. Laga soo bilaabo 1976-kii SL waxaa loo soo saaray nooca cusub ee A2. Isbeddelada ugu muhiimsan ee ka jiray SL waxay ahaayeen madax-goysyada iyo joogsiyada gadaal. A2 waxay heshay muuqaal cusub oo leh joogsiyada gadaal laba jibaarana oo qalabka cusub, dashboardka iyo qalabka gudaha gabi ahaanba la cusbooneysiiyay. Intaa waxaa u dheer, A2 waa baabuurkii ugu horreeyay ee Turkish ah ee qaada tijaabada shilalka si kor loogu qaado badbaadada gaariga. In kasta oo A2 loo naqshadeeyay sidii baabuur qoys, waxay kale oo ay sameysay guul weyn oo ganacsi waxayna gaartay wax qabad iib ah oo ah 35.668 unug, taas oo ka dhigaysa nooca ugu badan ee la iibiyay ee Anadol (2 cutub sida A1970 1975-20.267, iyo 2 unug oo ah A1976 SL). Wax soo saarka A1981 wuxuu dhammaaday 15.401 waxaana la beddelay A2-1981.
STC-1972, tusaalayaashii ugu horreeyay oo la soo saaray 16, waxaa la soo saaray intii u dhaxeysay 1973 iyo 1975. STC-16 waxaa naqshadeeyay Eralp Noyan. Sayidka loo Revolution ee 1961 (gaari) 'ka dib, loogu talagalay oo la macmalay oo horyaalka ugu horeysay-soo-saarka taxane baabuur ka dhacay Turkey.
Sannadkii 1971, Erdoğan Gönül, Maareeyihii Guud ee Otosan iyo soddoggii Vehbi Koç, ayaa ku qanciyay maamulka Otosan isla markaana helay oggolaansho wax soo saar ballaaran. STC-16 waxaa loogu talagalay in lagu siiyo dadka isticmaala dakhligoodu sarreeyo iyo sharafta astaanta shirkadda Anadol ee dibadbaxyada caalamiga ah. Waxaa soo sawiray koox uu madax ka yahay Eralp Noyan, oo ka qalin jabiyay Akadeemiyada Farshaxanka ee Royal Beljam, STC-16 waxaa dhiirrigaliyay Datsun 240Z, Saab Sonett, Aston Martin, Ginetta & Marcos. . Eralp Noyan, astaamaha nashqadeynta gudaha iyo dibedda ee gaariga II. Waxaa dhiirigeliyay Dünya Supermarine Spitfire olan, dayuuradaha horumarsan ee Dagaalkii Labaad ee Dunida, STC-16 ayaa la saaray khadka wax soo saarka oo leh A4 code, waxaa la soo gaabiyey oo wax laga beddelay naqshadda Anadol iyo nidaamka hakinta iyo matoorka 1600cc ee Mexico Mexico. Moodooyinka British-ka ah ee Cortina iyo Capri ayaa loo adeegsaday gudbinta. Boorsooyinka iyo alwaaxyada STC-16 kama duwana gawaarida isboortiga ee Talyaani iyo Ingiriiska ee sannadahaas. Marka laga reebo masaafada iyo masaafada, tafaasiisha cusub ee wakhtigaas waxaa ka mid ah tilmaame masaafo dib loo dejin karo, Lucas ammeter, saliida Smiths, gaasta iyo cabirka heerkulka. Dhamaadka wejiga horumarinta mashruuca, kaasoo socday 11 bilood, seddex nooc oo ah STC-3 ayaa loo diyaariyey wadista imtixaanka. Qeybta Istanbul-Adapazari ee garoonka Cengiz Topel iyo wadada dheer ee E-16 waxaa loo xushay aagag tijaabo ah. Tijaabooyinka shilalka ugu horreeyay ee STC-5 ayaa sidoo kale la sameeyay muddadan.
Dhamaadkii 1600, SV-1973 wuxuu soo degay gaari xamuul fiber-giraan giraan ah oo caalami ah oo ugu horreeyay adduunka oo leh lambar A5 ah.
Naqshadaynta "SV-4" waxaa dhiirrigeliya Reliant's Im Scimicar Sports-Station Coupé ”. Qalabka loo yaqaan '1600cc Ford (I-5) Kent' oo leh 1600 xirmooyin waaweyn ayaa ku qalabaysan matoor 4-dhululubo OHV ah.
Faahfaahin badan oo gaariga ayaa leh qaab dhismeedka Bertone iyo Pininfarina ee saldhigyada saldhigyada muddadii la soo saaray. SV-1600 waxaa kujira hal midab oo banaanka midab leh iyo mid hore udhaxeeya oo ah hal abuur cusub gawaarida saldhigga.
Muddo ka dib, noocyo raaxo leh oo dheeraad ah ayaa la soo saaray, iyada oo la adeegsanayo rinjiga dibedda laba-midab leh iyo naqshadda cusub ee gudaha. Tan iyo 1976, SV-1600-yadii waxaa lagu qalabeeyay giraanno aluminium aluminium ah, nooc cusub oo isteerinka ah iyo muraayadaha dhinaca naqshadaha cusub, halka rinjiga bannaanka laga soo saaray monochrome oo leh garaacyo madow iyo caddaan dhinacyada. Naqshadeynta gudaha, moodal kursiga la arki karo ayaa lagu dabaqay si loo ballaariyo mugga shandadaha.
Anadol / A6 / Cayayaanka (1975-1977)
Anadol Böcek waxaa naqshadeeyay Jan Nahum, oo ka soo shaqeeyay waaxda cilmi baarista iyo horumarinta ee Otosan sannadihiias. Sannadihii xigay, Jan Nahum wuxuu noqday maamulaha guud iyo maamulaha shirkadaha sida Otokar, Tofaş, FIAT / Italy iyo Petrol Ofisi. Aabihiis, Bernar Nahum, wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray aasaaska iyo soo saarida nuuca Anadol A1 ee shirkadda Otosan isagoo lammaane ka ah Ko partner. Claude Nahum oo ka soo jeeda qoyskan ayaa sameysay dadaalo muhiim ah labadaba sidii wadaha Anadol A1 darawalnimada iyo mashruuca mashiinka Otosan Anadol Wankel iyo horumarka. Maanta, waa aasaasaha shirkadda K ofraıa Group of Shirkadaha, oo sidoo kale leh Karsan Otomotiv Sanayi.
Anadol Cayayaanka ayaa soo galay khadka wax soo saarka 6 isaga oo leh lambarka A1975. Cayayaanka waxaa markii hore la sameeyay markii ay codsadeen Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga. In kasta oo Volkswagen uu la mid yahay kan gg Buggy ”, haddana waxaa loo soo saaray qaabeyn ka duwan marka loo eego fikradda iyo astaamaha. Otosan, iyada oo la tixgelinayo awoodda dalxiiska ee sii kordheysa iyo tirada tuulooyinka sii kordheysa sannadahaas, ayaa tixgeliyay baahida gaadiidka ee dadweynaha. Dusha sare ee furan, albaab aan lahayn, damac la mid ah midka suufka muraayadda, qaybaha kaladuwan ee qalabka iyo console ayaa ah fikirka ugu muhiimsan ee gaariga. Naqshadda hoodhka iyo muraayadda isla jaranjarada ayaa isku dhiirrigelisay SUV-yada soo if baxay sannadaha soo socda, iyo nashqadda dhismaha iyo qaabeynta qalabka korantada ee la aqbalay xilli dambe ayaa dhiirrigelisay soo-saareyaal badan oo reer Yurub ah naqshadda gawaarida.
Anadol Insect waxaa la soo saaray 1298cc iyo 63 matoor ah oo loo yaqaan 'HP Ford engine' waxayna leedahay wax qabad aad u sareeya culeyskeeda yar iyo kan yaryar. Waxa barbar socda naqshadeynta farshaxanka ee waqtiga, muuqaalka hore iyo muuqaalka dambe, marlabaad miiska asymmetric hore, gadaal midig 2, bidix 3 nal istaag, muraayad 5-xagal gadaal ah oo muraayadda muraayadda ah 225/55/13 taayir cabbir, taayir fiber-ka-fiirin leh oo leh kuraas aan caadi ahayn muuqaal.
Cayayaanka Anadol waxaa lagu heli karaa noocyo kaladuwan iyadoo loo eegayo isticmaalka iyo shuruudaha: Nooca garabka Seagull, nooca ka baxsan, nooca 'fisher / tractor' iyo nooca militari ee loogu talagalay durdurrada banaanka ee TRT.
Wax soosaarka cayayaanka Anadol, sida STC-16 waxay ku soo beegantay xilli nasiibdarro ah. Muddada fog ka hor labada lagu daydo ee ka dhasha dhibaato saliidda Maanaan Abuurin baahida ay sabab u tahay dhibaatooyin dhaqaale ee dunida iyo dalka Turkiga oo soo saarka loogu talagalay la joojiyay.
Intii u dhaxeysay 1975 iyo 1977, tirada moodooyinka cayayaanka la soo saaray waxay ahaayeen 203 kaliya.
Anadol A6 Cayayaanka
Anadol / A8 / 16 iyo Saloon 16 (1981-1984)
Soosaarista taxanaha 4-albaab A8-16 wuxuu bilaabay 1981. A8-16 waxaa dhiirrigaliyay SAAB iyo magacyada Volvo. Nashqadeynta A8-16 waxaa ku jira faahfaahinta horusocodka sida nalka ballaaran, sanka oblique, blunt iyo cut sare ee gadaal.
Si kastaba ha noqotee, joogsiyada gadaal, oo waxyar ka sii cuslaaday marka la barbar dhigo 1981 oo loo adeegsaday Insect, kuma habbooneyn falsafadan cusub. Sababtoo ah naqshadda hore ee gawaarida awgeed, A8-16 waxaa sidoo kale loo yaqaanaa hal-doorka Baltaburun arasında dadweynaha dhexdeeda. Naqshadeynta gudaha ee hoolka ayaa sidoo kale ka hor imaaneysa macaamiil badan oo dhaqameed Anadol ah. Waxaa loo qaabeeyey 1973, albaabada SV-1600, glazing iyo meegaarada ayaa sidoo kale loo adeegsaday A8-16, kuwaas oo, inkasta oo khadadka cusub, ay abuureen dareen uruurin.
In kasta oo waxqabadka sareeya 1981 Pinto E-Max matoorkiisa loo adeegsaday waxsoosaarkooda 1982 iyo 1.6, haddana kuma filna in gaariga la siiyo jawi wanaagsan. Sidaas darteed, aaladii hore ee Ford (I-1983) Kent, 1984-dhululubo OHV, iyo 16 matoor oo waaweyn 4cc matoor ayaa loo adeegsaday moodalka Saloon 4, kaas oo loo saaray qadka wax soo saarka 5 iyo 1600 si loo yareeyo kharashaadka wax soo saarka.
Moodeelka A8-16 waxaa la soo saaray sannadihii 1981-1984 oo keliya 1.013.
Gawaarida Anadol (1971-1991)
Shaqada ugu horeysa ee Anadol van waxay bilaabatay 1970-kii. Xaqiiqdii, fikradda soo-saarista gawaarida xamuulka qaada ee ugu horreysa waxay soo baxday markii Anadol A1 lagu beddeley warshaddii Otosan si loo qaado alaabada. Bernar Nahum wuxuu arkay gaarigaan intuu warwareegayay hareeraha warshada mana uusan jeclaan muuqaalkiisa, laakiin wuxuu soo jeediyay in gaadiidkan oo kale loo adeegsan karo gaadiidka ganacsiga fudud.
Waqtigaas, horumarka ganacsiga gudaha sannadihii hore ee warshadaha iyo furitaanka, gaar ahaan ganacsatada yaryar ee xamuulka xamuulka ah ee "qaadista" (xiisaha) waxay bilaabeen inay kordhiyaan xiisaha. Halkaas, shaqo ayaa laga bilaabay aqoon-isweydaarsiga fiberlass-ka oo waxaa la dhisay unug yar oo ah fiberglass fiberlass (cabin iyo chassis). Si kastaba ha noqotee, soo saarista iyo adeegsiga gaadiidkan ma ahan mid wax ku ool ah sababtuna tahay soo saarista timaha koobka ee timaha lagu gooyo oo bilaawday. Anadol vans wuxuu bilaabay wax soo saar ballaaran 1971 waxaana suuq loogu iibiyey sida Otosan 2 oo leh P500 code wuxuuna ku qalabaysan yahay matoorka gaaska 1300cc. Tan iyo 1980, mashiinka gaaska 1300cc iyo 1200cc Erk diesel engine ayaa loo adeegsaday wax soo saarka. Mashiinka shidaalka qaada ee 1600 cc Ford OHC, oo sidoo kale loo adeegsaday Ford Taunus, ayaa loo adeegsaday websaydhka Weber carburetor-ka ee laba jibaaran. Intaa waxaa sii dheer, gudaha gaariga ayaa dib loo hagaajiyay, marka loo eego mudada waxaa la siiyay qalab aad u casri ah. In kasta oo qaybaha ay ka samaysan yihiin balaastiig, waxaa xitaa loo tixgelin karaa inay yihiin raaxo baabur yar sannadahaas. Muujiyeyaasha hore ayaa lagu badelay Smith halkii Smith, lambarada tusayaasha waxaa laga beddelay huruud huruud iyo caddaan. Ulaha xakameynta kuleylka ayaa sidoo kale loo meeleeyaa si toosan, signa uma aha. Isteerinka isteerinka sidoo kale waa la cusbooneysiiyay calaamadaha dhexda ee isteerinka waa la weyneeyay. Astaan ​​la mid ah ayaa ku yaal daboolka caagga ah ee ku yaal bartamaha sagxadaha. 83 Kadib markii lagu daydo P2 Otosan 600D suuqa, 4-dhululubo, toosan, mashiinka sare ee 1900 cc ERK diesel engine ayaa qalabaysan. Qaabka hoodhi hore ayaa sidoo kale la bedelay xariiqa jeexjeexana hoodhkii waxaa lagu beddelay qaab bararsan.
Vadooyinka Anadol waxaa laga soo saaray isbadal yar oo naqshadeyn ah laga soo bilaabo 1971 ilaa 1991 oo leh 36.892 cutub
Hay'ado badan oo dowladeed sida PTT ayaa sanado badan la shaqeeyey soo qaadashada Anadol. Si kastaba ha noqotee, baahida loo qabo gawaarida gawaarida ee loo yaqaan 'Anadol' gawaarida xamuulka qaada ayaa aad u kordhay ilaa muddadii ay Moodooyinka A2-ga la jaray oo isu beddelay gawaarida xamuulka ayaa bilaabatay, gaar ahaan halka baahida aan laga qaban. Sharci dejinta ayaa sidoo kale taageeray wax ka badalka liisanka muddadan, kumanaan gawaarida Anadol ah ayaa loo rogay gawaarida fudud.
Xataa maanta, basaska Hmong ku dhowaad gees kasta oo Turkey sii wadaan in ay u adeegaan.
Sidee Anadol Automobile u dhashay iyo Taariikhda
Sidee Nooca Gaari Anadol Loo Yaqaanay
Qaraxyo ku soo badanaya India
12 xabsi daa'in ah oo ku dhacay shil tareen oo ka dhacay 3.5 ee Jarmalka
Mr. Kılıçdaroğlu, waxaan kuu rajeynayaa safar wanaagsan
Burcad-badeedda Pickpocket ee magaalada Bursa
Shirkadda tareenada ee Isbanishka ee ADIF tuhmanayaasha ku jira xaalad shil tareen ah
Waa inaanu kuu sameynaa metrobus
Hürriyet wuxuu Marmaray u tixgeliyaa sida aquarium
Howlaha dekedda ee qareenka eedaysanaha ayaa sameeyey hadal
2'er Thousand 24'er ciqaab ah oo loogu talagalay shil tareen oo lagu eedeeyay Kayseri
Bayram waxa uu sheegay in uu ku tababari doono Izmit Metro
Dib-u-dhiska: Cusboonaysiinta Khadka Sincan-ANKARA-Kayas (Baskent)
Baabuurkii ugu horreeyay ee Turkish ah
Gawaarida Nooca Turkiga
Bursa waa in lagu xiraa shabakadda tareenka ee ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah